Blog Statistics	Total Visitors: 278026
Window PC သုံး Software များ Archive
Regeneration Huawei Unbricker (Beta1)
Huawei ဖုန်းတွေ Logo ရပ်နေတာ ဖြစ်ဖြစ် Dead နေတာဖြစ်ဖြစ် ဒါ Tool လေးနဲ့စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့ အတွက်ကတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ Official Firmware (update.app) လေးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ tool ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Huawei phone တွေ Board Firmware တင်ပြီးလို့ ဖြစ်တက်တဲ့ Theme,Noti,Network Lock , imei အစရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး အသုံးပြုနည်းကတော့ Update.app ကို Software ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ပါ။ သူ့ဘာသာ Extract လုပ်ပေးသွားပါတယ်. ဖိုင် Size ပေါ်မူတည်ပြီးကြာပါလိမ့်မယ် ဖုန်းကို Qualcomm 9008 Mode ၀င်လိုက်ပါ။ jig ထိုးပြီးဝင်ဝင် Test point ထောက်ဝင်ဝင် အဆင်ပြေသလိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Software မှာ Start Flashing	Read More
Android ဖုန်းတော်တော်များကို Frp ဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Adb Command များ ၊ Fastboot Command များ
Error ရှင်းနည်းများ, Mobile Tool များ, Window PC သုံး Software များ, သတင်းများ
Android ဖုန်းတော်တေ်ာများများကို Frp ဖြုတ်ချင်ရင် ဒီ Command တွေသုံးပြီးဖြုတ်လို့ရပါတယ်. တစ်ခုမရရင် တစ်ခုသုံးပေတော့ 🙂 Command 1 ========== adb shell content insert –uri content://settings/secure –bind name:s:user_setup_complete –bind value:s:1 Command2========== adb shell content insert –uri content://settings/secure –bind name:s:user_setup_complete –bind value:s:1 Command3=========== adb shell am start -n com.google.android.gsf.login/ Command4=========== adb shell am start -n com.google.android.gsf.login.LoginActivity	Read More
Lg G4 H815 Qualcomm Board Software
Firmware တင်နည်းများ, Firmware များ, Mobile Tool များ, ဗဟုသုတများ, သတင်းများ
LG G4 H815 ရဲ့ Qualcomm 9008 ကနေ တင်ရတဲ့ Board Software လေးပါ။ Dead နေတာတွေ အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ 🙂 LG G4 H815 Dead Fix Qpst Latest Read More
Qualcomm 9008 မှ မိမိဖုန်းအတွင်းရှိ Partition များ Backup ရယူနည်း
Google App သွင်းနည်းများ, Mobile Tool များ, Window PC သုံး Software များ, ဗဟုသုတများ
Qualcomm 9008 ကနေ Dongle ဘာညာမသုံးပဲ Partition လေးတွေ Backup ယူလို့ရပါတယ်. အလုံးတိုင်းတော့ ဘယ်ရမလဲ 🙂 emmcdl ကို တော့အသုံးပြုရပါမယ်. ပထမဆုံးအနေနဲ့ မိမိဖုန်းကို Qualcomm 9008 ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် မိမိဖုန်းရဲ့ CPU နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Firehose ကိုရှာဆွဲပါ။ Facebook က Bro မျိုးသန့်ဇင်တင်ထားတဲ့ Firehose ပေါင်းချုပ် ကိုအောက်မှာပေးထားပါတယ်။ prog_emmc_firehose files.rar password – Myothant Zin မိမိ CPU နာမည်က msm8610 ဆိုရင် prog_emmc_firehose_8x10.mbn ဒီလောက်မျိုးလေးပေါ့ အကယ်လို့ msm8916 ဆိုရင် prog_emmc_firehose_8916.mbn ပေါ့ emmcdl Latest ကို ဒီမှာဆွဲပါ။ Emmcdl Latest ပြီးရင် cmd ဖွင့်ပါ ရိုက်ရမဲ့	Read More
QSahara ကို သုံးပြီး Qualcomm 9008 မှ Board Firmware တင်နည်း
အရင်တုန်းကတော့ Manually Flash မယ်ဆိုရင် Qualcom 9008 ကနေ emmc dl ကို အသုံးပြုကျတယ်. CPU အမြင့်တွေမှာဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနည်းလမ်း လေးနဲ့ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာလေးတွေအရင်ဆွဲပါ။ QSahara.exe Fh_loader.exe ပြီးရင် ဖုန်းကို Qualcomm 9008 ကို ကြိုးထိုးပါ။ Jig နဲ့ ၀င်ဝင် adb က၀င်ဝင် အဆင်ပြေတဲ့နေရာကသာ ၀င်ပေတော့ Download ဆွဲလို့ရလို့တဲ့ File နှစ်ဖိုင်ကို Board Firmware ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Command Prompt ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပထမဆုံး Qsahara နဲ့ ချိတ်ရပါမယ် ရိုက်ရမဲ့ Command ကတော့ Qsahara -p \_\_.\_COM90 -s 13:prog_firehose_8916.mbn ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကတော့	Read More
Regeneration Xiaomi Wiper
Mobile Tool များ, Window PC သုံး Software များ
Xiaomi ဖုန်းများကို Sideload Mode ကနေ Factory Reset ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Software လေးပါ။ Password,Pattern ကျနေရင် ဒီ Tool နဲ့အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Regeneration Xiaomi Wiper MI Account ရှိနေရင်တော့ Account ပြန်တောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းကို Volume Up + Power ဖိနှိပ်ပြီး အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်နေရင်ကြိုးထိုးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Check Now ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် Wipe ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် Factory Reset လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ရေးသားသူ – ဖြိုးချမ်း (Regeneration Mobile Service & Training) Read More
Mrt Dongle Version 1.33
Mobile Tool များ, Offical Box Setup, Window PC သုံး Software များ
Mrt Dongle အသုံးပြုသူတွေအတွက် Latest Version လေးပါ။ Meizu,Oppo,Vivo,Xiaomi,huawei အစရှိတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ Lock တွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။ ၀ယ်ယူချင်သူတွေအနေနဲ့လဲ Regeneration မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်. အောက်မှာ Download ရယူပါ။ Download Here Read More
1234567	Facebook Live Traffic Stats